မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူများအနက် မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ကြောင့် လေးပုံတစ်ပုံရ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူများအနက် မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ကြောင့် လေးပုံတစ်ပုံရ?
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းသူ လေးပုံတစ်ပုံသည် မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူများဖြစ်ကြရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းရုံးချုပ်(ရန်ကုန်)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်ဦးက ပြောကြားသည်။ သြဂုတ် ၂၄ ရက်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း (မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး)တို့မှ မသန်စွမ်းသုံးအ ထောက်အကူပြုပစ္စည်း ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ပညာသင်စရိတ်ပေး အပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ အလှူငွေပေးအပ် ခြင်းနှင့် ရုံးခွဲအသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအ ခမ်းအနားတွင် ၎င်းကပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
”မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူတွေရဲ့ အရေအတွက်ထဲမှာ လေးပုံတစ်ပုံက မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ကြောင့် ခြေလက်ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တခြားကိုယ်အင်္ဂါမသန် စွမ်းတွေကတော့ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်၊ မွေးရာပါမသန်စွမ်းတွေ ဖြစ်တာရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြော သည်။ ယင်းသို့ မြေမြှုပ်မိုင်းဖြစ်ပွားရ ခြင်းသည် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ဖြစ် ပြီး အများဆုံး ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ဒေသ များတွင်အဖြစ်များကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင် မောင်အေးမှ အမှာစကားပြော ကြားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူများအသင်းရုံးချုပ် (ရန်ကုန်)ဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ဦးမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ ဦးမြတ်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက မသန်စွမ်းသုံး အထောက်အကူ ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဝှီးချဲများ၊ ပညာသင်စရိတ်များ မသန်စွမ်းသူများကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း (မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီး)ရုံးခွဲ ရန်ပုံငွေအတွက် စေတနာရှင်များထံမှ အလှူငွေများလက်ခံခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်အင်္ဂါမ သန်စွမ်းသူများအသင်း (မကွေး တိုင်းဒေသကြီး) ရုံးခွဲမှဥက္ကဋ္ဌဦး ကျော်ဟိန်းမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့သည်။